Motivation for success :: दुबईको नेस्ट एकेडेमीको नेपालमा गैर कानुनी धन्दा, मानव बेचबिखनको आरोप
दुबईको नेस्ट एकेडेमीको नेपालमा गैर कानुनी धन्दा, मानव बेचबिखनको आरोप
प्रकाशित मिति : शुक्रबार, असार ४ २०७८
काठमाडौँ – संयुक्त अरब इमिरेट्स (दुबई)को नेस्ट एकेडेमी एन्ड म्यानेजमेन्ट एजुकेसन (नेम दुबई)ले नेपालमा अवैध रूपमा काम गरिरहेको पाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू लिएर चलिरहेको उक्त कलेजले नेपालबाट अवैध रूपमा विद्यार्थी लिएको पाइएको हो ।
विगतमा विभिन्न कन्सल्टेन्सीहरूलाई आफ्नो एजेन्टहरू मार्फत काम गरिरहेको उक्त कलेजले अहिले भारतलाई ट्रान्जिट बनाएर नेपाली विद्यार्थीहरूलाई दुबई पुर्‍याउने काम गरिरहेको छ । एजेन्ट मार्फत काम गर्दा धेरै फाइदा नभएपछि तथा गोपनियताको सवाल उठेपछि उक्त कलेजले नयाँ रुट पत्तालगाएको हो । विदेश अध्ययन गर्न जाँदा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट ‘नो अब्जेक्शन लेटर’ लिएर वैधानिक रूपमा जाने प्रावधान भए पनि यो कलेजले नेपालबाट भारतको महाराष्ट्र हुँदै नेपाली विद्यार्थीहरूलाई दुबई पुर्‍याउने गरेको तथ्य खुलेको हो ।
कुनै पनि वैधानिक निकायमा दर्ता नभई, शैक्षिक परामर्शको स्वीकृति समेत नलिएर खुलेआम नेपाली विद्यार्थीहरूलाई प्रलोभन पारेर खाडी पुर्‍याउने काम भइरहेको छ ।
नेपालमा यो काम रोयल मानव भनिने मानव शाहले गरिरहेका छन् । २०७५ साल असार १४ गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पार्कभ्यु एजुकेसन कन्सल्टेन्सी नामको कम्पनी दर्ता गरी उनले नेपालमा यो धन्दा सुरु गरेका हुन् । उनलाई यो धन्दामा नेम कलेजका डाइरेक्टर निर्मल शाहले सहयोग गरिरहेका छन् ।
जम्मा १ सय ५० जना विद्यार्थी रहेको यो कलेज नेपालबाट विद्यार्थी लिने, केही समय पढाएजस्तो गर्ने र पछि काम लगाएर भगाउने गरेको पाइन्छ । नेपालबाट अध्ययनका लागि गएका विद्यार्थीहरू कोही कसैले पनि त्यो कलेजमा अध्ययन नगरेको कन्सल्टेन्सी क्षेत्रकै जानकारहरू बताउँछन् । ‘त्यही कलेजमा मैले पनि विद्यार्थी पठाएको थियो । तर अहिले त्यहाँ कुनै पनि मेरो विद्यार्थी छैनन् ।’ एक व्यवसायीले भने, ‘नेपालबाट विद्यार्थी भनेर लाने र उता पुगी सकेपछि कामदारका रूपमा परिणत गर्ने यो कलेजको मुख्य धन्दा हो । त्यही भएर मैले विद्यार्थी पठाउन छोडिसके । एक वर्ष पनि त्यहाँ विद्यार्थी टिक्दैन ।’
पार्टभ्यु एजुकेसन दुबई नामको फेसबुक पेजमा भेटिएको विज्ञापनले यो कुराको पुष्टि गर्छ । विज्ञापनमा विद्यार्थीका लागि पार्ट टाइम र फूल टाइम काम गर्ने अवसर रहेको भनेको छ । अझ उसले गर्ने विभिन्न सेमिनारहरूमा कामको ग्यारेन्टी नै दिने गरेको छ । ‘महिनाको तीन हजार दिराम कमाउने ग्यारेन्टी म दिन्छु । काम कति पाइन्छ कति’, पार्कभ्युका स्टाफ आसिकले जुन १० तारिखको सेमिनारमा भनेका थिए, ‘पार्ट टाइम २६ घण्टा कानुनले नै दिन्छ । बिहान बेलुका समय निकालेर अरू काम गर्न पनि पाइन्छ ।’
कन्सल्टेन्सीको नाममा म्यानपावरको काम गरिरहेको यो भन्दा ठूलो प्रमाण अरू के हुन सक्छ । अध्ययनलाई फोकस गर्न पर्ने शैक्षिक परामर्श व्यवसायीले खुलेआम म्यानपावरको धन्दा चलाउनु गैर कानुनी कार्य हो ।
महँगो ट्युसन शूल्क
उक्त कलेजले विद्यार्थीबाट महँगो ट्युसन शूल्क लिने गरेको छ । कामका लागि दुबई जान पर्‍यो भने जम्मा १० हजार रुपैयाँ भए पुग्छ । यो कलेजले त्यही कामका लागि ७ देखि ८ लाख रुपैयाँ लिन्छ भन्दा फरक पर्दैन । विद्यार्थीको नाममा कामदार लिइरहेको उक्त कलेजले पहिलो वर्षको ट्युसन फी ४ हजार ५ सय अमेरिकी डलर भनेको छ ।
दोस्रो वर्षमा पनि यो कलेजले ४५ सय नै भनेको छ । दुई वर्षसम्म विद्यार्थी आफै साइट लागेनन् भने उनीहरूलाई साइट लगाउन ट्युसन फी बढाउने नीति उक्त कलेजले लिएको छ । त्यही नीति अनुसार तेस्रो वर्षमा विद्यार्थीले ५ हजार ५ सय डलर तिर्न पर्ने हुन्छ । त्यो रकम तिर्न सहमत भएको विद्यार्थीलाई अन्य देशमा पठाइदिने भन्दै अर्को फण्डा यो कलेजले गर्ने गरेको छ ।
अर्को देशको कलेज वा विश्वविद्यालयमा पठाउँदा कमिसन आउने भएकाले त्यो कलेजले हुने खाने विद्यार्थीलाई अस्ट्रेलिया, क्यानडा, बेलायत, अमेरिका र युरोपका अन्य देशहरूमा पठाउँछ । त्यसरी पनि नगएका विद्यार्थीलाई अर्को बर्ष ६ हजार ५ सय ट्युसन शूल्क लिएर विद्यार्थीको ढाड सेक्ने गरेको छ । त्यही भएर पनि विद्यार्थीहरू त्यो कलेजमा नटिक्ने गरेको परामर्श व्यवसायीको भनाई छ ।
डिप्लोमा लेभलको यो कोर्ष जम्मा ३ वर्षको हो । त्यहीँका अन्य कलेजहरूमा गएपछि त्यही कोर्ष जम्मा तीन वर्षको हो । तर पैसा असुल्नकै लागि निर्मल शाहले यो कोर्सलाई जानाजान ४ वर्षको बनाएको जानकारहरूको भनाई छ ।
दर्ता छैन कन्सल्टेन्सी
२०७५ साल असार १४ गते दर्ता भएको पार्कभ्यु एजुकेसन कन्सल्टेन्सीले परामर्श व्यवसाय सञ्चालनका लागि कुनै पनि निकायबाट स्वीकृति लिएको छैन । नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाले २०७२ साल भन्दा यता कसैलाई पनि अनुमति नदिएको बताएको छ ।
‘४ सय जति फाइल स्वीकृतिका लागि शाखामा आएका थिए । विविध कारणले ती फाइलहरू विभागको कुनामा थन्किएर बसेका छन् ।’ शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाका प्रमुख फटिक बहादुर केसीले भने, ‘केहीले प्रदेशबाट अनुमति लिएको भन्ने छ तर शाखाले उनीहरूलाई चिन्दैन ।’
मानव शाहले भने आफू शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तरगतको शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखामा दर्ता भएर काम गरेको बताएका छन् । मोटिभेटसँगको कुराकानीमा उनले आफूहरू दर्ता भएरै काम गरिरहेको बताए । उनले शाखामा दर्ता भएको कुरा हामीलाई बताएको भएपछि उनले भने आफ्ना नजिकका साथीहरूसँग बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा दर्ता भएको बताउँदै आएका थिए । ‘१ लाख तिरेर हेटौडामा दर्ता गरेको भन्दै हुनुहुन्थ्यो त !’ आश्चर्य प्रकट गर्दै एक व्यवसायीले भने,’तपाईसँग त्यस्तो भन्नु भयो रु त्यो भए त शङ्का लाग्यो ।’
जस आफूलाई अबजस अरूलाई
पार्कभ्यु एजुकेसनका सञ्चालक शाह आफै हुन् । उनले आफू मातहतमा दुई जना क्रियटिभ स्टाफ राखेका छन् । उनीहरूको नाम हो आसिक र मन्दीरा । उनीहरू काउन्सिलिङको काम गर्छन् । मानव शाहले उनीहरूलाई जसरी पनि विद्यार्थी कलेक्सन गर्न टाक्स दिएका छन् ।
त्यही टाक्स पुरा गर्नका लागि आसिक र मन्दीराले विभिन्न खालका प्रलोभन देखाएर विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गर्ने प्रयत्न गरिरहेका हुन्छन् । त्यसमध्येको एउटा हो जागिर । काउन्सिलिङको मुख्य विषय नै दुबईमा जागिर भन्ने हुन्छ ।
‘एनी हाउ विद्यार्थी ल्याऊ’ को नीतिले गर्दा उनीहरूले गलत कुरा गरेर विद्यार्थीलाई प्रलोभन पारेर भने पनि आफू उम्किने ठाउँ खाती राखेका छन् । आफू काउन्सिलिङमा प्राय बस्दैनन् । पछि केही समस्या परिहाल्यो भने उनीहरूलाई देखाएर पन्छिन पाइ हालिन्छ की १ भनेर उनले बठ्याइँ गरेका हुन् । यो कुरा उनका स्टाफहरूको जानकारीमा छैन ।
कलेजबाट महिनाको १ लाख तलब खाने गरी कन्ट्री म्यानेजर बनेका शाहलाई जति जना विद्यार्थी पठाउन सक्यो त्यतिकै मात्रामा कमिसन पनि आउने गरेको छ । स्टाफलाई तलब वेसमा राख्ने, आफूले कमिसन खाने, समस्या पर्दा पन्छिने उनको यो रणनीति निकैले आश्चर्य मानेका छन् ।
भारतको विज्ञापन दुबईको व्यापार
माथि देखिएको फोटो भारतको नेस्ट एकेडेमीको हो । शाहले यही फोटो देखाएर व्यापार गरिरहेका छन् । उनले भारतमा रहेको नेस्ट एकेडेमीका लागि भर्ना खुल्यो भनेर विज्ञापन गर्दै विद्याथीलाई ठूलो विल्डिङ देखाएर प्रलोभनमा पार्दै दुबईको व्यापार गरिरहेका छन् ।
तपाईले मुबई र जयपुरमा पनि विद्यार्थी पठाउनु हुन्छ ? भन्ने मोटिभेट प्रश्नमा शाहले आफूले दुबई मात्र विद्यार्थी पठाउने गरेको बताए । ‘हामीले भारत विद्यार्थी पठाउने विषयमा अहिले सोचेका छैनौँ । अहिले हामी नेस्ट दुबईमा मात्र विद्यार्थी पठाउने हो ।’ उनले भने, ‘भर्खर सुरु गरेको हो । विस्तारै त्यता पनि सोच्न पर्ला ।’
विज्ञापनमा त मुम्बई पनि राख्नुभएको रहेछ नी ? भन्दा उनले आफ्नो बोली लर्बराएर भने, ‘…..त्यस्तो होइन् होला ।